Tsamba kuvaFiripi 3:1-21
Kusavimba nenyama (1-11)
Kuona zvinhu zvese sekurasikirwa nekuda kwaKristu (7-9)
Kusveerera mubayiro (12-21)
Kuva vagari vekudenga (20)
3 Saka hama dzangu, rambai muchifara munaShe.+ Hazvindinetsi kukunyorerai zvinhu zvandakambokunyorerai, uye zvinotokuchengetedzai. 2 Chenjererai imbwa; chenjererai vaya vanokuvadzisa; chenjererai vaya vanocheka nyama.+ 3 Nekuti ndisu takanyatsochecheudzwa,+ isu vari kuita basa dzvene nemweya waMwari uye vanozvirumbidza muna Kristu Jesu,+ tisingavimbi nenyama. 4 Kana paine munhu ane zvikonzero zvekuvimba nenyama, chokwadi ndini. Kana mumwe munhu achifunga kuti ane zvikonzero zvekuvimba nenyama, ini ndinotomupfuura: 5 ndakachecheudzwa pazuva rechi8,+ ndiri werudzi rwaIsraeri, wedzinza raBhenjamini, muHebheru akaberekwa nevaHebheru;+ panyaya yemutemo, ndiri muFarisi;+ 6 panyaya yekushingaira, ndaitambudza ungano;+ panyaya yekururama kunobva pamutemo, ndaiva munhu asina chaanopomerwa. 7 Asi zvinhu zvandaiona sepfuma, ndakazozviona sekurasikirwa* nekuda kwaKristu.+ 8 Uyewo ndinoona zvinhu zvese sekurasikirwa kana ndichienzanisa neruzivo rwaKristu Jesu Ishe wangu rune ukoshi hwepamusorosoro. Ndakabvuma kurasikirwa nezvinhu zvese nekuda kwake uye ndinozviona semarara, kuti ndiwane Kristu 9 uye kuti ndiwanikwe ndiri pamwe naye, kwete pamusana pekururama kunobva pakutevedzera Mutemo, asi kururama kunovapo kuburikidza nekutenda+ muna Kristu,+ kururama kunobva kuna Mwari kwakavakirwa pakutenda.+ 10 Chinangwa changu ndechekuti ndimuzive nesimba rekumuka kwake+ uye kuti nditambure pamwe naye,+ ndichibvuma rufu rwakafanana nerwake,+ 11 kuti ndione kana zvichiita kuwana mukana wekumutswa kuvakafa parumuko rwekutanga.+ 12 Hakusi kuti ndatouwana kana kuti ndatoitwa munhu akakwana, asi ndiri kuvavarira+ kuti ndione kana ndingakwanisa kubatawo chacho chakaita kuti Kristu Jesu andisarudze.+ 13 Hama, handioni sendatoubata; asi chinhu chimwe chete chandiine chokwadi nacho ndechekuti: Ndinokanganwa zvinhu zviri shure,+ ndosveerera zvinhu zviri mberi,+ 14 ndichivavarira kuti ndiwane mubayiro+ wekudanwa kumusoro+ naMwari achishandisa Kristu Jesu. 15 Saka isu tese tine kutenda kwakasimba+ ngativei nemafungiro akadai, uye kana muine mamwe mafungiro akasiyana neaya pane dzimwewo nyaya, Mwari achakuratidzai mafungiro ari pamusoro apa. 16 Asi kusvikira patasvika tichienda mberi, ngatirambei tichifamba zvakanaka nenzira iyi. 17 Hama, ivai vatevedzeri vangu makabatana,+ uye rambai makatarisa vaya vari kufamba maererano nemuenzaniso watakakuratidzai. 18 Nekuti kune vakawanda vari kufamba sevavengi vedanda rekutambudzirwa* raKristu. Ndaigara ndichitaura nezvavo kakawanda, asi iye zvino ndava kutaura nezvavo ndichichema. 19 Kuguma kwavo kuparadzwa, mwari wavo idumbu ravo, kukudzwa kwavo kunotova kunyara kwavo, uye pfungwa dzavo dziri pazvinhu zvenyika.+ 20 Asi isu tiri vagari+ vekudenga,+ uye takamirira nemwoyo wese muponesi anobva ikoko, Ishe Jesu Kristu,+ 21 uyo achachinja muviri wedu usina simba kuti ufanane nemuviri wake unokudzwa+ kuburikidza nesimba rake guru iro rinoita kuti akwanise kuisa zvinhu zvese pasi pake.+
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “ndakasarudza kuzvirasa.”